Malagasy – Telly's Photos
admin2017-12-14T07:34:05+00:00December 13th, 2017|
Ny saran’ny sary tsirairay azo avy amin’ny solosaina dia 15 dolara
Ary afaka ampidirana ny mombamomban’ny sary
Ny saran’ny sary azo avy amin’ny finday dia 2 dolara isakin’ny sary
Ary sara tsy misy fetra ny hoan’ny sary azo avy amin’ny karazana fitaovana samihafa
Fomba fanomezana ny loka
Ny vola izay loka rehetra dia alefa amin’ny alalan’ny tambazotra fandefasam-bola iraisam-pirenena. Tadidio anefa fa ny fazahoana loka dia tsy miankina amin’ny fitaovana akana sary na amin’ny paka sary fa amin’ny fotoana angalana azy ,ny fahatsarany ary fanaterana ny sary.
Ny sary dia misy ireto zavatra manaraka ireto
Anarana,adiresy mailaka,ny lohaten’ilay sary ,afaka mampiasa ny tenin-drazanao ianao raha ilaina ary mb tantarao amin’ny teny fohifohy ny mombamomban’ny asa tananao.
Ny fifaninanana dia misotraka hoan’ny olon-drehetra ,hoan’ny fiteny rehetra,hoan’ny firenena rehetra,hoan’ny sokajin-taona rehetra ,hoan’ny olona zay manofinofy ary hoan’ny mino rehetra .Iaino antsakany sy andavany ny fianana izay iainanao izao.Ny maha zava-dehibe ny fifaninana izay karakanay dia mba hitehirizana fahatsiarovana ny asan’ny tananao.
Mba hampietsim-po anay
Amin’ity fifaninana ity dia misy fomba telo afaka andresena lahatra ny mpitsara.
1)Amin’ny alalany ny famoronana izay atolotrao anay no mba tianay ahitana ny hatsarana voanjanahary rehetra,ny tena zava-misy marina,ny hery rehetra,ny fiainana rehetra,ny fahendrena tanteraka amin’ity tanin-tsika ity.
hanampy anay hahatsapa
2)Mila ny fonay mba tena ho babo tanteraka izahay ary amin’ny fankafizana maka sary sy mamorina dia tena maniry izahay mba ho taitaitra indrindra mitantara ny aingam-panahinao ianao.Ary mba teneno anay hoe inona no ny sary izay omenao dia ho voasokajy ho sary hampietsi-po olona. Ary ahoana no anehoanao fa “tena tsy hampianatra ny olona hanimban’ity tontolon-tsika ity ny asan-tananao”.
Afaka hampihaino sy hiresaka aminay
3)Te haheno izahay zavatra mibitsika amin’ny sofinay,na io hafaliana na io tomany ary mba haharitra fona izany feo izany.Feo izay miaraka amin’ny fotoana sy ny tontolo misy azy.Ity dia fotoana anakiray mba ahafahanao hampiasa ny fahaizanao amin’ny resaka sary ary izany fahaizana izany dia entinao hampietsi-po ny olona eran’izao tontolo izao.Na sary anakiray dia afaka anehoana fa inona no zavatra hitanao ny fakan-tsary raitra izay ananao.Mila ny teny izay. ataonao mba hanokatra varavarana mba afaka hidiranay izahay,mba hahafahanay mieritreitra izay eritreretinao,hahafahanay hahita izay hitanao,hahatsapanay izay tsapanao ary hahenoanay izay henonao.
Ny mpitsara miandry antsika hampihetsi-po azy ireo satria dia olombelona ary mety mora tohina amin’ny talenta izay ananatsika.Voninahitra hoanay ny fandraisana izay sary atolotrao.
Ny tanjonay dia mba hanao fifaninana amin’ny resaka sary izay tsy miankina amin’ny hatsaran’ny fitaovana izay ampesainao na amin,ny fahaizanao mikirakira sary.
Tianay raha mba mifantoka bebe kokoa amin’ny zava-misy iainana andavanandro ny sary izay atolotrao,tena mba hanome fafinaretana,hanaitaitra ny fonay,tena mba itondranay amin’ny tontolo hafa mihintsy.
Maniry hahita zavatra hanome aigam-panahy anay izahay ary hitondranay lavitra mba ahitanay ny zavatra kely miafina izay mety hanohana ny fon’i hafa.Sary izay afaka ifandraisanay amin’ny pakasary ary hiteny azy hoe “ tsara be” ny sary izay nalainao fa misy feo mahery.
Maniry izahay mba hitahiry izany sary izany anaty boky rakitsary ary hamerina izany any aminao mba hahitanao isanandro izany talenta ananao.
Izany rehetra izany dia mba singa iray entinao hanosika ny tenanao sy mba hanehoanao ny maha izy anao ary indrindra mba hahalalanao ny talenta miafina ao aminao.
Raha toa ka mahita an’ity pejy ity ianao ary fantatrao fa mbola tsy tenin-drazanao dia afaka mifandray aminay ianao raha toa ka liana handika ity pejy ity amin’ny teninao,afaka manazava bebe kokoa momban’ny torolalana hanaovanao izany izahay.Ny tena tanjonay dia mba hiparitan’ity fifaninana sary ity amin’ny fiteny rehetra.Mino izahay fa fifandraisana iraisam-pirenena amin’ny alalan’ny talenta,asan-tanana dia harena sarobidy tokoa nefa dia latsa-danja.
Mila ny firaisankina ny eran’izao tontolo izao isika mba hanohanana sy hanovana izany.
Fifaninana tsy misy sakan-tsankana.